खाध्य बिज्ञानको मान्यतालाई पन्छाएर गरिएको अनुगमनले नेपालमा खाध्य अांतङक मच्चियो । | Canadian Reporters
खाध्य बिज्ञानको मान्यतालाई पन्छाएर गरिएको अनुगमनले नेपालमा खाध्य अांतङक मच्चियो ।
Posted on August 18, 2016 , updated on November 10, 2016 by क्यानेडियन रिपोटर्स
नेपालको अनलाईन खबरमा डिडिसिमै भेटियो १ लाख किलो म्याद नागेको पाऊडर दुध भनि समचार आयो । तेसमा पनि एकातर्फ रिलेबलिङ् (Re-labeled) गरिएको समाचार अार्को तर्फ बिभागका निर्देशकले ठुलो परिणाममा भएकाले प्रयोग नहोस भनि शीलगरेको भनिएको ब्यहोरा छ। फेरि अन्तमा परिक्षण बाट ऊपयोग गर्न अयोग्य ठहरिए नष्ट गरिने भनेर नमुना पनि लगेको भनिएको छ।
सामान्य अाँखाबाट हेर्दा जे भयो त्यो अाशागरे अनुरूप लाग्न सक्छ। तर प्राबिधिक रूपमा हेर्दा यसमा गम्बिर त्रुटि देखिन्छ। सबै भन्दा पहिले यसमा न त डिडिसि न त अनुगमन टोलिले नै खाध्य पदार्थको म्याद भनेको के हो भन्ने बारेनै सामान्य जानाकारि पनि नभएजस्तो देखियो। दोस्रो यदि ऊनिहरूलाई ऊक्त जानाकारि थियो भने किन एऊटा पक्षले बैज्ञानिक परिक्षण बिनानै रिलेबल गर्यो र अार्को पक्षले शिल बन्दि गरेर फेरि स्याम्पल लग्यो। स्याम्पल के सम्पुर्ण प्रडक्टको प्रतिनिधि नियमानुसार गरियोकि ख्बास्स १-२ बोरा काटेर लिईयो?
यदि खान अयोग्य होकि हैन परिक्षण नगरि थाहा नहुने हो भने किन कुन नियत ले डिडिसि र सरकारि सम्पतिमाथिनै ऊपभोक्ताको नकारात्मक असर पर्ने गरि मिडियामा यत्रो गाईजात्रा मच्चाईयो? भोलि के ऊक्त प्रडक्ट खान र प्रयोग योग्य पाईए यो अनुगमन टोलि क्षतिपुर्तिको लागि सक्क्षम र तयार छ? कि नेपालमा जे गरे पनि केहि हुदैन ऊक्त टोलिमा हुदां वाहावाहि कमाऊन जस्तोसुकै गैरजिम्बेबार काम गर्न पनि पछि पर्न नहुने नियत बाट ग्रसित छ।कि यसको नकारात्मक असर प्रति केहि हेक्का नभएको गोबर गणेश टोलि बनिरहेछ अनुगमन को नाममा?
प्राबिधिक रूपमा खानाको प्रयोग म्याद बा सेल्फ लाईफ (shelf Life) बारे कुरा गर्दा “गुड म्यानुफ्याकचरिङ प्राक्टिस” गाईडलाईन GMP Guidelines को अाधार लिईन्छ। ऊक्त जियमपि गाईडलाईन अनुसार खाध्याण्ड ऊपभोक्तामा सिधै जाने हो (Finish Product) बा ऊपभोक्तामा पठाईने खाध्य पदार्थको कच्चा पदार्थको रूपमा जाने हो (Industrial Raw Materials) तेसमा भर पर्छ। ऊपोभोक्तामा जाने तैयारि खाध्य पदार्थ हो भने यसमा बेष्ट बिभोर डेट (Best Before Date) दिईनुपर्छ र मिति गुज्रेपछि त्यसलाई बजार बाट हटाऊन पर्छ । बिज्ञको सहयोग लिएर ति पदार्थ अब कम अार्थिक हानि हुनेगरि केमा र कसरि ऊपयोग गर्नेहो भन्ने तर्फ ध्यान दिईन्छ। फिरन्ते मनिटरिङ टिमका (Mobile Monitoring Team) सदस्यले तेसलाई फोकस गर्नु मुख्य एेजेण्डा हुन्छ।
जहाँसम्म खाध्य पदार्थको कच्चा पदार्थका कुराहरू छन तेसलाई जियमपिमा “रि-टेष्ट पिरियड” Re-Test Period भनेर तोकिएको छ। जसमा दिईएको सेल्फलाईफ पार भईसकेपछि निर्धारित बैज्ञानिक परिक्षण हरू गर्ने र बिज्ञहरूको राय अनुसार के यो कच्चा पदार्थ अझै फाईनल प्रडक्टमा अाशा गरिएको मापदण्ड दिन शक्क्षम छ भनि मुल्याङ्कन गराईन्छ। र सक्षम पाईए प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अबस्थामा सामान्य तया टेस्ट गर्नु पहले दिईएको सेल्फ लाईभ सकिएको दिन बाट सेल्फ लाईफको अाधा अबधि (Normally we assign half of the date of previous date assigned as extended shelf life) दिईन्छ। कुनै अंक को अाधा कहिलै जिरो नहुने हुनाले जब सम्म परिक्षण बाट यो अयोग्य ठहरिन्न तब सम्म यो फाल्नै पर्ने कुरो भएन।
जाहासम्म डिडिसि (DDC) को केस छ त्यो (Powder Milk saved to use for Reconstitutions) प्रसोधन गरिएको भएपनि कच्चा पदार्थहो । ऊपयुक्त परिक्षणले सहि ठहर्याए सम्म यो एक्सपायर हुने हुदैन। यसलाई ऊपभोक्ताको स्बास्थ लाई केन्द्रमा राख्दै जबसम्म सुरक्षित पाईन्छ तबसम्म सेल्फ लाईफ बढाऊदै लानुनै बैज्ञानिक पद्दति हो।
बिज्ञान कसैको ईमोसन र सनकको हैन ब्यबारिकता को पक्षधर हुनाले सबैले त्यसलाई मानिअाएको हो। तेसैले ऊधारणको लागि हामि बजारमा खाध्याण्डनै भएपनि चामलको सेल्फलाईफ तोकिन्छ तर धान त बर्षों बर्स भकारिमै रहेपनि अापत्ति हुदैन। अब रहयो पाऊडर दुध को कुरा। सामान्यतया रेफ्रिजिरेटरमा मात्र ४-५ दिन टिक्ने पाऊडर दुध सामान्य रूम टेम्प्रेचरमा (Pantry) बन्द प्याक भित्र २ देखि १० बर्ष सम्म टिकेको बैज्ञानिक डाटा छ। यसको गुणस्तर स्टोरेजमा भर पर्ने र सामन्यतया बोरा या कन्टेनरको भित्रि प्लाष्टिक एयर टाईट गर्दामात्रै १० बर्ष सम्म टिकाऊन सकिन्छ। अझ भ्याकुम प्याक (Vaccum Inerd Pack) गरि कुल ड्राई प्रेसमा (Cold Dry Dark Place) राख्न सके झन बढि टिकाऊन सकिने भई हालियो।
नेपालबाट सुनिएको यो दुरभाग्यपुर्ण समाचार बास्तबमा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। बास्तबिकता के हो भने खाध्य क्षेत्रका अतिमहत्बपुर्ण क्षेत्रको निर्णयमा गैर खाध्य बिशेषज्ञको प्रभुत्ब र प्रभाब भएबाट नेपालमा अहिले खाध्य अांतङक मच्चिएको छ। बैज्ञानिक मान्यता (Scientific Facts) र ब्यबाहारिक अनुकुलताका (Applied Feasibilities) बिपरित जे पनि खान नहुने भनि बजारमा डर फैलाऊने काम एकातर्फ भईरहेको छ भने अार्कोतर्फ लामो दव्न्द (very long internal war crisis) लाई पचाएर धन्य टिकेको र बामे सर्दै गरेको डिडिसि वा जसोतसो ऊठन लागेका निजि खाध्य ऊधोगहरू (very small food industries) बन्द गराऊने तर्फ चाहेर नचाहेर गतिबिधि हरू अघि बढिरहेका छन्।
खाध्यबस्तुको सबालमा नेपालिको टेष्टबड (Taste Buds) भारतिय टेष्टबढ सँग मिल्ने हुनाले यि गतिबिधिले अन्तत भारतिय खाध्य ऊधोग हरूको लागि बजार तैयारि गरिदिएको छ। नेपालको सम्बन्धित पक्षको ध्यान यसमा तुरून्तै जाने सँम्भाबना पनि निकै कम देखिन्छ।
जमाना क्वालिटि बाई डिजाईनकोआयो- क्बालिटि कन्ट्रोल प्रबिधि हैन क्बालिटि एसुरेन्स सिकौ!!
तपाईंको थर कसरी रहन गयो, थाहा छ ? छैन भने एक पल्ट पढनुहोस
नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनको औपचारिक सुरुवात कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले पानसमा बत्ती बालेर गरे
के साँच्चै लड्न लागेका हुन् त प्रचण्ड ?
The Downside of Six Sigma
नेपालमा भारतको नाकाबंधी विरुद्ध बेल्जियमका सभामुखलाई दिइयो अति प्रभावकारी Memorandum पत्र
चर्को दवावपछि शुभेच्छा थापाले ‘माफी ’मागेकी छिन्
मंगलग्रहमा प्रथम मानब सहितको रकेट पठाउने काम जारी : नासाका इन्जिनियरहरु २०१८ मा परिक्षण गर्दै
गैरआबासिय नेपाली संघको आर्थिक स्थायित्व समीतीको पहिलो कन्फ्रेस कल बैठक सम्पन्न
राष्ट्रपतिले काग्रेस सभापतिलाई फोन गरेर भने,‘ मलाई फेरि मौका दिनुस’
अन्तत: ओन्टारियोमा नेपाली मन्दीरले आफ्नै घर पायो: मन्दिरको विधिवत स्थानान्तरण र स्थापना शुक्रवार शुरु गरिने: नेपालीहरु अति ऊत्शाहीत!
Proactive Behaviors in Personal Health & Wellbeing
कसरि जुटाए देउवाले आफ्नो लागि भारतको समर्थन : यस्तो डिजाइनमा आएको थियो सिटौलाको उम्मेदवारी
नेपाल तक रेल लाइन बिछाएगा चीन : चीन भ्रमणमा पीयम ओली राष्ट्र बादी छबि राख्न सफल: भारतमा रुवाबासी